Gaddafi: lesona ho any hafa ve?
2011-03-13 @ 20:13 in Politika
Mbola ratsy dia ratsy ny seraseranay mampiasa ny moov adsl amin'ny fotoana anoratana fa sambasamba raha toa mahatafavoaka ity lahatsoratra ity. Mba mijery ny vaovao iraisampirenena ihany ny tena indrindra moa fa misy ny lahatsoratra avadika ho teny malagasy ho azon'olona maromaro kokoa. Mitodika any Libya ny tena ka variana. Nidaraboka ny tany Tonizia sy ny tany Ejipta. Noheverina hahatontosa ny tolony ihany koa ny mpanohitra tany Libya saingy toa nahazo vahana tampoka ny mpitondra rehefa niditra tamin'ny "hadalana" bebe kokoa. Tsy niraharaha izay mpanohitra any izy fa tonga dia norarafany tsy nananany antra mihitsy. Nodarohany baomba, ary notifiriny avy tey an-habakabaka izay nanohitra azy.
Etsy ankilany, nanao fahadisoana ihany koa ny mpanohitra tao Libya na dia nampihatra ny habibiana aza ny mpitondra tao. Fahadisoana fantatra, nanagadra diplomaty anglisy ny SAS niaraka taminy ny mpanohitra manana karazana foibe ao Benghazi (24ora) ho "famaizana" sy ho "fampitandremana" ho an'ny Tandrefana fa tsy azon'ny Tandrefana idirana ny raharaha tokatranon'ny Arabo. Tonga dia nampihemotra ny Tandrefana tanteraka ny nisian'ity trangan-javatra ity na dia tsy nabaribary loatra aza. Tonga amin'ilay karazana fiteny hoe ataovy ao ary ny anareo. (namana no nampita io raharaha diplomaty nogadraina io). Fahadisoana faharoa etsy ankilany nisy indray ny nihazakazaka ho any amin'ny Filoha Frantsay Sarkozy ireo avy amin'ny mpanohitra ireo ihany. Ireo naman'ny Frantsay rehetra anefa tamin'ity raharahan'ny lohataona Arabo ity dia resy avokoa dia i Ben Ali sy Mubarak izany.
Fahadisoana hafa ihany koa, maika loatra niditra tamin'ny resaka an-kitifitifitra amin'ny fitaovam-piadiana ny mpanohitra ka lasa mpioko indray. Sahirana tanteraka anefa ny firenenkafa raha vao niditra amin'izay fifanandrinana amin'ny fitaovam-piadiana izay ny roa tonta. Karazana fanafana farany ny nataon'i Gaddafi raha nizara ny fitaovam-piadiana tamin'ny mpanohana azy izy ary hita mihitsy tamin'ny fahitalavitra vahiny moa izany toe-javatra izany. Tsy noraharahiany mihitsy ny aorian'ity krizy ao amin'ny firenena misy azy ity rehefa mbola tafapetraka teo amin'ny toerana misy azy ihany izy ary mirona mankany moa ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao.
Dia lasa ny saina, raha manao zavatra tsimifaditrovana kokoa indray izany ny mpitondra vao mety ho tafajanona amin'ny toerany raha nahomby ity paika nataon'i Gaddafi ity ka mety ho lesona ho an'ny mpitondra Afrikana hafa rehetra ve? Tena tsy nitsitsy mihitsy ranamana ka na miaramila tsy mety manoa baiko aza dia notaperiny fotsiny izao ny ainy. Hanao ahoana ny ho avin'ny resaka tolona politika hafa rehetra aorian'ireo toe-draharaha rehetra mitranga any amin'ny faritra Arabo ireo? Isika eto Madagasikara dia mahita fa tsy ampinga sy kibay no entin'ny "mpitandro ny filaminana" hamoretana ny "mpanao fihetsiketsehana" fa basy avy hatrany mihitsy no arangaranga izay tokony ho fady tena FADY raha hifanehatra amin'ny sivily. Moa ve tsy hirona mankany ny ataon'ny mpifehy ny fahefana eto Madagasikara raha maherihery vaika ny tolona hanoherana azy? efa hitantsika rahateo ny paika fisamborany ny mpanohitra amin'ireo karazana "sarimihetsika" atao etsy sy eroa.
Jentilisa 13 mars 2011 amin'ny 22:10